गोप्य रुपमा शाहरुख खानले गर्दै छन् यस्तो काम ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodगोप्य रुपमा शाहरुख खानले गर्दै छन् यस्तो काम !
बलिउड चर्चित अभिनेत्री दिपिका पादुकोणले आफ्नो फिल्म ‘छ्पाक’को छायांकन केहि समय अगाडी सुरु गरेकी छिन । उनले एसिड एट्याकमा परेकी लक्ष्मी अग्रवालको भूमिका निर्वाह गर्दै छिन । यो एक बायोपिक फिल्म हो ।
यसैक्रममा भखरै सार्वजनिक भएको खबरका अनुसार,अभिनेता शाहरुख खानले पनि एसिड एट्याकमा परेका व्यक्तिहरुलाई सहयोगगरिरहेका छन् । उनले आफ्नो एन्जियोको माध्यमबाट यस्ता व्यक्तिहरुको साहयतासंगै उपचार गरिरहेका छन् ।
यो सर्जरी दिल्ली र वाराणसीमा हुनेछ जसमा शाहरुखले पनि ४०-५० व्यक्तिको सर्जरी गराउदै छन् । गत वर्ष उनलाई यस्तै व्यक्तिहरुको सहयोग गरेकोमा उनलाई सम्मान समेत गरेका थिए ।